ကျွန်တော် ဒီနေ့ အွန်လိုင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေ မေးနေတာကို တစ်လှည့်စီ ဖြေပေးနေတုန်း dangerousking101@gmail.com အကောင့်က လာပြီး invite လုပ်လာတာနဲ့ လက်ခံလိုက်ပါတယ် . ကျွန်တော့်မှာ အားလုံးကို ပြန်ပြီးဖြေတာ ဖြစ်လို့ တစ်ခါတစ်လေ မှာ ၃ မိနစ်လောက် ကြာတတ်ပါတယ် . အောက်မှာတော့ တစ်ကယ့်ကို အပီအပြင်ကို ဆော်ကားလိုက်တာပါ . ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကို ကျွန်တော် စိတ်မ၀င်စားပေမယ့် အတော်လေးကို မိုက်ရိုင်းတာပါ . သူငယ်ချင်းတို့ဆီမှာလဲ အဲ့ဒီ့အကောင့်ပိုင်ရှင် ရှိတယ်ဆိုရင် ပြောပြလိုက်ပါဗျာ . ကျွန်တော်ကတော့ သူဘယ်ကလဲ ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လိုက်ပြီး ရှာရင်ရနိုင်ပေမယ့် စိတ်မ၀င်စားတော့ပါဘူး . သူများတွေလိုပဲ မေးချင်တာမေး၊ ဖြေချင်တဲ့ စိတ်ကူးပေါက်မှ ထဖြေ ဒါပဲကောင်းပါတယ် . စိတ်ရောကိုယ်ရော နှစ်ပြီး ကျွန်တော် အပင်ပန်းခံသမျှတော့ အဆဲခံရတာပဲ အဖတ်တင်ပါတယ် . စိတ်တော့် အတော်လေးကို ကျသွားတာဗျာ . ဖိုင်တင်ဖို့ စိတ်ကူးထားတာတွေလဲ မတင်ဖြစ်တော့ဘူးဗျာ . အောက်မှာကြည့်လိုက်ပါ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ စကားထဲမှာ ဘာများအမှားပါလဲလို့ .
7:27 PM that right
7:28 PM please tell me english speking
you reply me
7:29 PM me: ဘာအကြောင်းသိချင်လို့လဲ
dangerousking101: you cnn speak english
7:30 PM please tell
I don't understand upon your typing
if you can type myanmar language, you can type easy.
7:31 PM dangerousking101: you say english
7:33 PM i do not myanmar typing
7:34 PM you can say english
dangerousking101: please tell
7:36 PM me: what do you asked me?
7:37 PM dangerousking101: please wait i am busy
7:43 PM dangerousking101: saronara
7:50 PM dangerousking101: fuck you
7:51 PM moher fucker
Posted by ညီနေမင်း at 5:52 AM
ပေးဆပ်သူ September 21, 2009 at 6:57 AM
မရွှဲ့မစောင်းကိုယ့်လမ်းကြောင်းကို၊ စိတ်ကောင်းနှင့်ယှဉ်ရှေ့ရှု နှင်လော့""
ကုန်ရှုံးတစ်ခေါက်၊ လင်ကုန်ရှုံး တစ်သက်လုံးမှောက်၊ ဆရာရှုံးလျှင် တစ်သံသရာလုံးမှောက်သည်
ကုန်သွယ်သူသည် ကုန်စည်အမျိုးအစားနှင့် ပေါက်ဈေးအတွက် အချက်မှားလျှင် ဖြစ်စေ၊ အခြေအနေအရ စရိတ်ပိုမို ကုန်ကျခြင်း၊ ဈေးကျခြင်း၊ ကုန်စည်ပျက်စီးခြင်း စသည် တို့ကြောင့်ဖြစ်စေ အရှုံးပေါ်လျှင် တစ်ခေါက်အတွက်သာ ရှုံးပေမည်။ နောက် တစ်ခေါက်တွင် မြတ်ကောင်း မြတ်နိုင်စရာရှိသည်။
အိမ်ထောင်ပြုရာတွင် ကောင်းမွန်စွာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြု၍ လုပ်ကိုင် ကျွေး မွေးသော အိမ်ရှင်လင်ယောက်ျားမျိုးကို မရဘဲ အလုပ်အကိုင် မလုပ်ချင် ပျင်းရိညံ့ဖျင်းရုံသာ မက မကောင်းမှုများဖြင့် သုံးဖြုန်းကာ နှိပ်စက်ရိုက်နှက်တတ်သော လင်ဆိုးနှင့်ကြုံရမည် ဆိုလျှင်မူကားတစ်သက်တာလုံးအတွက်
မှောက်မှားခြင်းဖြစ်၍ ပြုပြင်ရန် ခက်ခဲစေတော့သည်။
ထိုမှတစ်ပါး တရားစစ်တရားမှန်ကို ညွှန်ပြနိုင်မည် အထင်ဖြင့် ဆရာအမှတ်ပြု ကာ ဆည်းကပ်နည်းခံရာတွင် ဆရာကောင်း ဆရာမြတ်မဟုတ်ဘဲ တရားစစ် တရားမှန် မသိဘဲ အကျင့်အယူ မှားယွင်းစွာ ဟောပြောညွှန်ပြခြင်းခံရပါမူ သံသရာမှ ထွက်မြောက် နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ သံသရာဘ၀ ရှည်လျား သံသရာဘ၀အဆက်ဆက် မှောက်မှားစရာသာ ဖြစ်ချေမည်ဟုဆိုလို သည်။
မှားယွင်းနစ်နာမှုသည် အကြောင်းကိစ္စလိုက်၍ ဆုံးရှုံးမှုသေးငယ်သောအရာ လည်း ရှိသည်။ ကြီးမားသော အရာလည်း ရှိသည်။ အနည်းအပါး ဆုံးရှုံးမှုမှာ မထောင်း သာသော်လည်း ကြီးမားသော ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးအတွက် ထိခိုက်နိုင်သဖြင့် ဆုံးရှုံး ရမည့် အကျိုးအပြစ် ပမာဏကို ချင့်ချိန်တွက်ဆ၍ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုမရှိအောင် သတိထားကြည့်ပါကိုညီနေမင်း
အစ်ကိုရေ အဲလိုလူတွေရှိကြတာပဲ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့နော်
အင်း ကြားရပြန်ပြီဗျာ ဟိုတစ်ခါ ကိုသံလုံငယ်တုန်းကလည်း တစ်ခေါက် ... အေးဗျာ မြန်မာလူမျိုးတွေကလည်း ကိုယ့်အပေါ်စေတနာထားလုပ်ပေးနေတဲ့ လူတွေဆို သိပ်စော်ကားချင်ကြတာ ... ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ကိုညီနေမင်း ... စေတနာဆိုတာ အကျိုးပေးမှာပါ ...
အဖြူရောင်နတ်သမီး September 21, 2009 at 4:25 PM
“ငှက်ဆိုးတစ်ကောင် လမ်းမှားပြီး အိမ်ထဲဝင်လာတယ်”..လို့သာမှတ်လိုက်ပါ...
မောင်စေတနာ September 21, 2009 at 7:27 PM
ကျနော်လဲ ခံခဲ့ရဖူးတယ်။ တစ်ကြိမ်မကပါဘူး။ ကျနော်တို့က ပရိသတ်အတွက် လာအက်သမျှကို လက်ခံပြီး ပြန်ဖြေလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်းမအားနိုင်ဘူးလေ။ မဖြေနိုင်တာတွေလဲ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် မဖြေရင်အဲဒီလို ရိုင်းသွားတာတွေ တစ်ကြိမ်မက ကြုံဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တောင်
မရွှဲ့မစောင်းကိုယ့်လမ်းကြောင်းကို၊ စိတ်ကောင်းနှင့်ယှဉ်ရှေ့ရှု နှင်လော့"" အဲဒီစာသားလေး တင်ပြီးကိုယ်စိတ်ကိုယ်ဖြေရတယ်။ စိတ်မပျက်ပါနဲ့။
AUNG LIN NAING September 22, 2009 at 1:53 AM
sawlinux September 22, 2009 at 3:06 AM
လုပ်ရင် ကိုယ်လဲပြန်ခံစားရမှာပဲ။ နည်းပညာရှင်မှန်သမျှ
စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ့်ကျမ္မာနဲ့ အလုပ်ကိုဆထက်တပိုးဆက်
ycowa(bangkok) September 22, 2009 at 3:11 AM
ကြားရတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ လောကကြီးမှာ အမှိုက်တွေအများကြီးရှိနေတယ် ဆိုတာ အထူးပြောစရာမလိုပါဘူ။ ကိုညီဆိုက်လ်ကို ကွှန်တော်တို့တွေ အားကိုးပါတယ်၊ ပိုစ် တင်အားကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဆိုပါတော့၊ ဆက်ပြီး ပညာဒါနတွေ အများကြီး ပေးနိုင်ပါစေ. .. လေးစားစွာဖြင့်
poe September 22, 2009 at 8:35 AM
အကိုဘယ်လို ခံစားရမယ် ဆိုတာနားလည်ပါတယ်ဗျာ...ဒါပေမယ့်် ဂရုစိုက်မနေပါနဲ့...အကို့စေတနာကို တစ်ယောက်နားမလည်ပေမဲ့ တစ်သန်းလောက်က အားပေးနေပါတယ်....
စေတနာရှင် September 23, 2009 at 1:48 AM
တချို့လူတွေ တော်တော် မိုက်ရိုင်းကြတယ်ဗျာ . .
ကိုယ်က ပညာဒါနလုပ်နေတာပဲ ကိုညီနေမင်းရယ်
ထားလိုက်ပါ ဒီလိုလူမျိုးတွေကို ဂရုစိုက်မနေပါနဲ့တော့ . . .
maung cupid September 27, 2009 at 6:24 AM
ခက်ထန်ကြတယ် မြန်မာပြည် မှာမနေကြရင်ကောင်းမယ်
chitko December 15, 2009 at 10:35 PM